चर्चित नायिका रेखा थापाको फिल्म ‘नीरफूल’को बदनामी गीतको भिडियो सार्वजनिक – osnepal tv
चर्चित नायिका रेखा थापाको फिल्म ‘नीरफूल’को बदनामी गीतको भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं, फागुन २ . प्रणय उत्सबको अबसर पारेर चलचित्र ‘नीरफूल’को नयाँ गीत दर्शकमाझ आएको छ । चलचित्र नीरफूलको ‘तिमी बदनामी…’ गीतको भिडियो हाईलाईट्स नेपालबाट सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा कुनै एक डान्स बारमा अभिनेत्री थापाले गीत गाएको दृष्य यसमा प्रस्तुत गरिएको छ । नायिकासँगै गायिकाको परिचय बनाएकी रेखा थापाले यो चलचित्रमा बार सिंगरकै भूमिका निर्वाह गरेकी हुन् । जसमा चलचित्रकी अभिनेत्री शान्ति वाईवा भूकम्पपछि जीवन यापनका लागि डान्सबारमा काम गर्न बाध्य भएको दृष्यहरुबाट बुझिन्छ ।
Previous article यसरी बनाउनुहोस् घरमा खाउँ खाउँ लाग्ने स्वादिलो आँपको अचार (विधि सहित)
Next article ड्युटीमा तैनाथ यि प्रहरीलाई कार्यालय अगाडी नै ठक्कर दियो जिपले, परिवारलाई सुख दिने तोयनाथको सपना अधुरै !
यसरी बनाउनुहोस् घरमा खाउँ खाउँ लाग्ने स्वादिलो आँपको अचार (विधि सहित)
ड्युटीमा तैनाथ यि प्रहरीलाई कार्यालय अगाडी नै ठक्कर दियो जिपले, परिवारलाई सुख दिने तोयनाथको सपना अधुरै !